पहिलो भेटमै आकर्षित हुनुभएन ? कतै तपाई डेमीसेक्सुअल त होइन? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
पहिलो भेटमै आकर्षित हुनुभएन ? कतै तपाई डेमीसेक्सुअल त होइन?
प्रविधिले मानव संवेदनामाथी जति नै आक्रमण गरेको भएपनि अर्को तर्फ यसले विभिन्न अवसरहरु पनि प्रदान गरेको छ। जस्तो कि अनलाइन डेटिङ।
अनलाइन डेटिङ एप अनि सामाजिक सञ्जाल तथा टेक्स, अडियो अनि भिडियो च्याट बाटै युवक/युवतीहरु आफ्नो जीवनसाथी खोज्न सक्छन्। र यो विधि झनै सजिलो, विश्वासिलो अनि उपयोगी पनि सावित हुँदैछ।
यसरी भेट्दै नभेटी पनि प्रेम सम्बन्ध कस्ने कसैलाई भने कत्ति पनि चित्त बुझ्दैन, अर्थात उपयोगी लाग्दैन। जसलाई प्रत्यक्ष भेटेकै छैन उप्रति कसरी रोमान्टिक हुन सकिन्छ? कोही अपरिचित प्रति प्रेम र आकर्षणको भावना आउन सक्ला र? त्यसैले पनि ब्लाइन्ड डेट अनि वान-नाइट स्ट्याण्ड कसैका लागि ‘हुन्न हुन्न’ बन्न पुग्छ।
यदि तपाइ ती व्यक्तिहरु मध्ये हुनुहुन्छ जो भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित नभएसम्म शारिरीक रुपले आकर्षित हुन सक्नुहुन्न भने तपाई डेमीसेक्सुअल पो हो कि?
डेमीसेक्सुआलिटी असेक्सुआलिटीको एक हाँगा हो। चाहे जुन उमेर वा लिङ्गको होस् असेक्सुअल व्यक्ति अर्को व्यक्तितर्फ सेक्सुअल्ली आकर्षित हुन सक्दैन। त्यस्तै भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित नभइ अर्को व्यक्तिसंग सेक्सुअल्ली आकर्षित हुन नसक्ने व्यक्तिलाई डेमीसेक्सुअल नाम दिइएको हो।
धेरै व्यक्ति अर्को व्यक्तिको तस्विर वा भिडियो देखेरै सो व्यक्ति प्रति सेक्सुअल्ली आकर्षित हुनसक्दछन्। तर डेमीसेक्सुअल व्यक्तिको लागि पहिले भावनात्मक सम्बन्ध बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छ।
डेमीसेक्सुअल व्यक्ति अन्य झै सजिलै प्रेम सम्बन्ध र यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दैन।
यी केही गुणहरु छन् जसबाट व्यक्ति डेमीसेक्सुअल भए-नभएको थाहा हुन्छ।
१. पहिलो नजरमै प्रेम! यो के हो?
धेरैजसोको लागि पहिलो नजरको प्रेम रोमान्टिक सुनिन्छ। कथा तथा फिल्महरुमा अत्याधिक प्रयोग गरिने फन्डा हो यो। तर डेमीसेक्सुअलको लागि यो निकै नौलो विषय हो। पहिलो नजरमै प्रेम हुने कुरा त परको कुरा, डेमीसेक्सुअल व्यक्ति पहिलो भेटमा अर्को व्यक्ति प्रति आकर्षित हुनै सक्दैन।
२. ‘पुरानो जमानाको’ व्यक्ति
छिटो डेटिङ जाने र पार्टनर बनाइहाल्ने यो जमानामा सुरुमा भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेर मात्र साथी बनाउन खोज्दा यौन जीवन सक्रिय नहुनसक्छ। अनि अरुले भन्न सक्छन्, ‘कस्तो पुरानो जमानाको’। डेमीसेक्सुअल अन्य प्रति कसरी आकर्षित नभइ बस्न सक्छन् अन्यले बुझ्दैनन। डेमीसेक्सुअलको लागि पहिलो प्राथमिकता इमोसन (भावना) हो, सेक्स होइन।
३. ब्लाइन्ड डेट र पहिलो नजरको प्रम असम्भव
कुनै नयाँ व्यक्तिसंग डेटको लागि भेटिनु अन्यको लागि जति रमाइलो हुन्छ डेमीसेक्सुअलको लागि त्यसो हुँदैन। कहिल्यै नभेटेको व्यक्तिसंग भावनात्मक सम्बन्ध अघि बढाउनु डेमीसेक्सुअलको लागि युद्धमा गए सरह हो।
४. लुक्सले फरक पार्दैन
पहिलो नजरको प्रेम मात्र असम्भव होइन, डेमीसेक्सुअललाई लुक्सले पनि हुनै फरक पार्दैन। शारिरीक रुपमा अर्को व्यक्ति कस्तो देखिन्छ संग डेमीसेक्सुअल कुनै मतलब राख्दैनन्। डेमीसेक्सुअलको लागि भावनात्मक सम्बन्ध बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
डेमीसेक्सुअलको रोमान्टिक रिलेसनशिप मित्रताबाट सुरु भएको हुन्छ। दुइ मित्र बिस्तारै नजिकिदै प्रेममा पर्छन्। छिटो र अहिल्यै सम्बन्ध गाँसिहाल्नुपर्ने भिडमा डेमीसेक्सुअलको यस्तो सम्बन्ध सबैले नबुझ्न सक्छन्।
Previousमाघ १९ः आजको राशिफल
Nextकरण जोहरको मल्टिस्टारर फिल्म ‘तख्त’ को पहिलो झलक